TOMATO STAROSELSKY SHARAXAAD KALA DUWAN, TALOOYIN IYO DABEECADAHA - BEER CAGAARAN
Hubin noocyo kala duwan oo saladh ah - yaanyo Staroselsky: sharaxaad, sawir, talooyin ku saabsan daryeelka
Maanta, yaanyada aqalka dhirta lagu koriyo ayaa noqda mid caan ah. Si kastaba ha ahaatee, yaanyada lagu beeray dhul furan, waxay leeyihiin caraf udgoon oo dhadhan, sidaas darteed waxay u baahan yihiin inay fiiriyaan.
Noocyada ku habboon sariiro furan, waa Staroselsky - si sahlan loo joogteeyo, wax soo saar, si degan u dulqaadanaya cayayaanka cimilada.
Staroselsky yaanyo: sharaxaad kala duwan
Magaca dugsiga Staroselsky
Sharaxaad guud Qiyaasta ugu horeysa ee tamaandhaynta ah ee tamaandhada ah ee beerashada dhul beeran iyo koriyo
Bisaylka 85-95 maalmood
Foomka Miraha way ku haboon yihiin waxayna ku wareegsan yihiin ribbada sahlan
Cunto dhexdhexaad ah ilaa 300 garaam
Codsiga Salad, soosaarka casiirka, pickling
Noocyo dhaadheer 6 kg mitir labajibbaaran
Noocyada sii kordhaya Kala soocidda 2-3 caws oo leh jarista tallaabooyinka dambe ayaa lagula talinayaa.
Kala duwan yaanyada Staroselsky waa noocyo kala duwan oo soo jiidasho leh. Bush go'aamiyey, is haysta, leh dhexdhexaad ah ee mass cagaaran. Kordhinta warshad qaangaar ah oo aan ka badnayn 1 m. Leaves waa mid sahlan, dhexdhexaad ah oo cagaar ah. Inflorescences waa sahlan.
Tamaandho waxay ku rusheeyaa buro 6-8 gogo '. Taabashadu waa mid aad u sareysa. Laga bilaabo 1 jibbaaran. mitir ee beerto, waxaad heli kartaa ugu yaraan 6 kg oo yaanyo ah.
Midabka midhihii bislaaday waa midab casaan, adag, oo aan lahayn dhibco iyo jilbaha. Jirka waa mid casiir leh, firfircoon, leh qadar yar oo miraha, sonkorta fasaxa. Tamaandhada waxay u adkeysanayaan inay jabaan. Dhadhanka waa mid qurux badan, isku dheelitiran, macaan leh dushiisa oo la arki karo.
Miraha waa weyn yihiin, miisaankoodu yahay ilaa 300 g, oo isku-fidsan, oo leh roogga iftiinka ee asliga ah. Isbarbardhig miisaanka midhaha kala duwan leh kuwa kale waxay noqon karaan jadwalka hoose:
Staroselsky ilaa 300 garaam
Buuxinta cadaan 241 100 garaam
Noocyo yaanyo Staroselsky ah oo caleenta roodhida hiwaayadda Ruush ah. Waxaa lagu taliyey in beerista gobollada leh jawi diiran iyo cimilada diiran, siiba doorasho beeraha sariiraha furan ama filimka hoostiisa. Miro la soo goostay ayaa si fiican loo kaydiyaa, gaadiidku waa suurtogal.
Miraha nooca salad. Yaanyada casiirka ah iyo midhaha cusub waa kuwo cusub, waana loo isticmaalaa si loogu diyaariyo cunto fudud, maraq, suugo, suxuunta kulul.
Yaanyada bislaado waxay sameeyaan casiir qaboojiye ah, taas oo aad cabi karto cabitaan cusub ama la goosto. Xitaa khudradda xitaa waa la kariyaa, la kariyaa, oo lagu daraa khudradda qudaarta.
Eeg sidoo kale: sida loo beero yaanyada aqalka dhirta lagu koriyo?
Waa maxay mulching iyo sida loo sameeyo? Waa maxay yaanyada loo baahan yahay pasynkovanie iyo sida loo sameeyo?
dulqaad qabasho yar oo qabow, kuleyl ama abaar.
Tilmaamaha kala duwan ee kala duwan waxaa ka mid ah baahida sare ee qiimaha nafaqada ee ciidda. Dalagyada waxay u baahan yihiin in la sameeyo iyada oo ay ka saareen caleemaha dhinaca xad-dhaafka ah.
Staroselsky 6 kg mitir labajibbaaran
Hoos ka fiiri: Tamaandhada Staroselsky sawir
Tamaandho noocyo Staroselsky ku taliyey in ay koraan habka seedling. Ka hor inta beero, miraha waxaa lagu qoyay xal of potassium permanganate, ku dhaqay biyo nadiif ah iyo qalajiyey. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan diyaarinta miraha beerista halkan. Carrabku wuxuu ka kooban yahay isku dar ah beerta ama dhul sodan leh humus. Seeds waxaa lagu beeray weelal yar oo qoto dheer, oo lagu buufiyo biyo.
Wixii biqilka wuxuu u baahan yahay heerkul ah 23 illaa 25 darajo. Caleemaha oo soo baxa waxay muujiyaan iftiinka iftiinka, marmarna waxay u jeedaan xitaa horumarka. Ka dib markii ay soo baxeen labadii u horreeyay ee kuwani waxay baxayaan geedo geedo ah. Yaanyada Young waxay u baahan yihiin si ay u quudiyaan bacriminta adag ee dareere ku salaysan potassium iyo nitrogen.
Qalabaynta dhul furan wuxuu bilaabmaa qeybta labaad ee bisha Maajo. Ciidda waa la furfuray horay, qaso qayb qayb deeqsinimo ah ee humus. Qoryaha geedaha waxaa lagu dhajiyay godadka (1 tbsp ee qaadada geedka). Buundada waxaa lagu beeray meel fog oo ah 40 cm iyada oo u dhexeysa ugu yaraan 60 cm. Kala soocidda 2-3 caws oo leh jarista tallaabooyinka dambe ayaa lagula talinayaa.
Tamaandho waa in si dhexdhexaad ah loo waraabiyo, oo keliya biyo diirran. Inta u dhaxeysa waraabinta lakabka sare ee carrada waa inay qalalaan.
Inta lagu jiro xilli dhirta waxaa la quudin jiray 3-4 jeer. Maaddooyinka macdanta leh ee la macmili karo oo leh nitrogen iyo potassium, iyo sidoo kale mullein qasi ah ama shimbirta. Daaweyn iyo marmar daaweyn ah oo ku saabsan xalalka aqueous ee superphosphate.
Staroselsky ee kala duwan ee yaanyo waa mid u adkaysata cudurada ugu weyn ee nightshade ah: verticillosis, fusarium, masagada tubaakada. Si kastaba ha noqotee, iyada oo aan jirin tiro tallaabooyin ka hortag ah oo aan sameyn karin.
Ka hor inta beerto, ciidda waxaa la daadiyay xal of kiriimiga kiriimiga ama sulphate copper. Dhirta yaryar waxaa lagu buufiyaa phytosporin ama bio-daroogo kale oo leh saameyn antifungal ah.
Laga soo bilaabo kalluunka xidid ka ilaaliyaa waraabin taxadar leh, loosening ama mulching ciidda, ka saarto haramaha. Caleemaha hoose ee duurka ayaa sidoo kale laga saari karaa.
Ka soo cayayaanka cayayaanka ayaa kaa caawin doona sunta cayayaanka, faleebo celcelin ama diirka basasha. Waxay si dhab ah u burburiyaan marinnada, caarada cad, caarada caarada.
Staroselsky - noocyo xiiso leh ee dhulka furan. Dhallaanka is haysta waa mid miro dhal ah, uma baahna daryeel xad dhaaf ah. Iyada oo quudinta waqtigeeda iyo waraabinta digtooni leh, waxaad ku xisaabtami kartaa goosashada wanaagsan.
Bobcat Qeybta madow Walaashka raspberry dahab ah